Andy Robertson Oo Si Cad U Magacaabay Xidiga Kooxdiisa Liverpool Ka Tirsan Ee Inta Ugu Badan U Qalma Abaal Marinta Laacibka Sanadka Ee Premier League. - Gool24.Net
Andy Robertson Oo Si Cad U Magacaabay Xidiga Kooxdiisa Liverpool Ka Tirsan Ee Inta Ugu Badan U Qalma Abaal Marinta Laacibka Sanadka Ee Premier League.
Difaaca bidix ee kooxda Liverpool ee Andy Robertson ayaa magacaabay xidiga kooxdiisa Reds ka tirsan ee uu aaminsan yahay in uu u qalmo in oo doorto laacibka sanadka ee horyaalka Premier League ugu fiican.
Waxaa la filayaa in xili ciyaareedkii labaad oo xidhiidh ah uu xidig Liverpool ahi ku guulaysan doono laacibka sanadka ee Premier League ugu fiican laakiin waxaa jira tartan badan maadaama oo ay jiraan ciyaartoy badan oo Reds ah oo xili ciyaareed cajiib ah soo qaaday.
Inkasta oo Van Dijk, Mane, Firmino iyo Salah ay ka mid yihiin ciyaartoyda loo saadaalinayo in ay u tartami doonaan abaal marinta xidiga sanadka ee Premier League, haddana Andy Robertson ayaa aaminsan in Jordan Henderson uu yahay kan ugu mudan in abaal marintan la siiyo.
Andy Robertson ayaa si wayn u amaanay kabtanka kooxdiisa ee Jordan Henderson kaas oo u muuqda in uu helayo taageero kooxda dhexdeeda ah si abaal marinta sanadka uu ugu guulaysan karo.
Difaaca bidix ee Andy Robertson oo qiraya in Jordan Henderson uu yahay musharaha hogaaminaya abaal marinta xidiga sanadka Premier league ayaa yidhi: “Aniga ahaan waxaan filayaa in isagu uu yahay musharaha hogaaminaya(xidiga sanadka)”.
“Markii aanu xili ciyaareedkan marar dhibtoonaynay, Hendo waxa uu ahaa midka hore noo kaxaynayay” ayuu Andy Robertson hadalkiisa ku sii xoojiyay.
Andy Robertson oo Jordan Henderson sii amaanaya ayaa yidhi: “Isagu waa midkii hubaasha ka dhigay in aanaan guuldaraysan, waxa uu caawiyay goolal xaqiiqdii muhiim ahaa”.
“Waxaa laga yaabaa in bandhigisii bilawgii xili ciyaareedku uu aha mid yara hooseeyay, laakiin marka uu xili ciyaareedku sii socdayba, xaqiiqdii isagu kulan xun muu qaadan” ayuu Robertson hadalkiisa ku sii daray.
Robertson oo tilmaamaha Henderson in Henderson aanu helin aqoonsigii uu dalkiisa uga qalmay ayaa yidhi: “Xaqiiqdii isaga waad u bogaysaa haddii aad la tababarato maalin kastaba, wadankan isaga loogama bogin in ku filan dabeecadiisa.
“Isagu waxa uu helayaa aqoonsigii uu u qalmay, sababtoo ah waa ciyaartoy fantastik ah, waa tusaale fantastik ah waana kabtan fantastik ah. Mararka qaar ayuu saddex dhibcood nagu dhaqaajiyay xili ciyaareedkan markii aanu dhibtoonaynay” ayuu Robertson hadalkiisa ku soo xidhay.